Herinandron’ny frankofonia : minisitera telo hahazo rakibolana teny frantsay | NewsMada
Herinandron’ny frankofonia : minisitera telo hahazo rakibolana teny frantsay
Mbola ho elaela ny volana novambra, handraisan’i Madagasikara ny fivoriana an-tampony faha-16 an’ny frankofonia. Na izany aza, tsy ankiato ireo hetsika samihafa manodidina ny frankofonia. Eo rahateo ny Herinandro natokana ho an’izany, izay manomboka androany.
Anisan’ireny hetsika ireny ny fanoloran’ny masoivoho frantsay eto amintsika rakibolana amin’ny teny frantsay miisa 650 ho an’ny minisitera telo : Fanabeazam-pirenena, Fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika. Nosafidina ireo departemanta ireo satria samy miahy ny fanabeazana.
« Natokana ho an’ireo liam-pahalalana sy mamakafaka ny fivoaran’ny teny frantsay ity rakibolana ity. Natao ho an’ireo olona matihanina eo amin’ny sehatry ny fanabeazana sy ireo mpisehatra amin’ny fandrosoana ara-toekaren’i Madagasikara ihany koa ».
Hotontosaina ny alarobia 16 marsa izao, eny amin’ny Institut français de Madagascar (IFM) etsy Analakely, ny lanonana ofisialy hanoloran’ny ambasadaoro frantsay ireo fitaovana ireo. Hanotrona izany ireo minisitra misahana ireo departemanta telo ary koa ny mpamatsy vola ny hetsika.